Maxaad Ka Ogtahay Xidhiidhka Ka Dhexeeya Haweenka, Caafimaadka Iyo Kobaca Dhaqaale - Daryeel Magazine
Maxaad Ka Ogtahay Xidhiidhka Ka Dhexeeya Haweenka, Caafimaadka Iyo Kobaca Dhaqaale
Daraasad iyo buug cusub oo la magac-baxay jinsiga iyo nabadda adduunka (Sex and World Peace), ayaa si isku mid ah u shaaciyey in xidhiidh weyn oo toos ah ka dhexeeya amniga, caafimaadka, koboca dhaqaale iyo musuqmaasuqa qaramada adduunka.
Nin borofaseer ah oo lagu magacaabo Valeria M. Hudson iyo saddex khabiir oo ay asxaab yihiin ayaa daaha ka qaaday xidhiidhka cilmiyeysan ee ka dhaxeeya amniga haweenka iyo caafimaadka guud, koboca dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo daryeelka bulsho.
Mr. Hudson waxa uu sheegay in waxyaabaha lagu saadaalin karo amniga iyo nabadda qaran aanay ahayn heerka uu qaniga yahay, dimuqraadiyada, dhaqanada diimiga ee ka jira, balse ay ku xidhan tahay sida dalkaas haweenka loogala dhaqmo.
Khubaradan buugga iyo daraasadda soo wada saaray, waxay heleen in waddamada dimuqraadiyadoodu sarrayso, balse haweenka lagu xadgudubo, lagalana dagaallamo tacliinta, isla markaana aan loo samayn adeegyada caafimaad ee dhalmo, siyaasaddana laga qaybgelin ay yihiin qaar aan xasilloonay.
addaalad-darrooyinkani waxay saameeyeen xasilloonida qaranka China iyo waddamo badan oo badan oo adduunka wood ku sheegta,” ayuu yidhi Mr. Hudson.
Daraasaddani waxay shaacisay in waddamada uu ka mid yahay dalka Maraykanka aad loogu xadgudubo haweenka kana dhacaan guurar khasab ah iyo inaanay sidii loogu talogalay uga qaybqaadan mansabyada siyaasadda.
Maxaad Ka Taqaan Lawska Walnut Iyo Caafimaadka Ku Jira 12 Sumadood oo uu leeyahay Xidhiidhka Caafimaadka Qaba Faraqa U Dhexeeya Saliidaha Laga Tuujiyo Dhirta Iyo Dufanka Xoolaha Xidhiidhka iyo Is-moogaysiinta W/Q: Mubarak Hadi